Android P Developer Preview မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ?
9 Mar 2018 . 2:37 PM
Google ကနေ Android Version 9.0 ဖြစ်လာမယ့် Android P ရဲ့ ပထမဆုံး Developer Preview ကို Google Pixel Devices တွေအတွက် ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Google ဟာ Android P က ဘယ်နာမည်ကို ကိုယ်စားပြုလဲဆိုတာကို မပြောကြားခဲ့သေးသလို Pixel C Tablet နဲ့ Nexus Devices တွေကိုလည်း Android P Support ကို တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခု Google ရဲ့ Android Version 9.0 တဖြစ်လဲ Android P ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Notch Bar အတွက် Optimize ပြုလုပ်ထားခြင်း
၂၀၁၈ ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Apple iPhone X ကနေ အစပြုခဲ့တဲ့ Notch Bar ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ Android စမတ်ဖုန်းတွေကိုလည်း ကူးစက်လာပြီဆိုတာက ငြင်းလို့မရနိုင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Google ကနေ Android P Developer Preview မှာ Clock Indicator ကို Screen ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ရွေ့ပေးခဲ့ပြီး Notch Bar ကိုပါ Virtually Simulate ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Feature ကို Developer Option ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
2. ပိုပြီး ပြည့်စုံလာတဲ့ Notification Bar ပေါ်က Message Reply Function
Android Version 7.0 Nougat မှာ စတင်ပြီးတော့ တကယ်လို့ ဖုန်းကို Message ဝင်လာတယ်ဆိုရင် အဆိုပါ Message ကို Notification Bar ကနေပဲ Reply Function ကို Google ကထည့်သွင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Android P မှာတော့ အဆိုပါ Function ဟာ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်လာပြီးတော့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ Message မှာ ဓါတ်ပုံပါတယ်ဆိုရင် အဆိုပါ ဓါတ်ပုံကိုပါ Preview အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားမယ့်အပြင် Message Reply တွေမှာလည်း AI ကတစ်ဆင့် Generate ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် Automatic Reply တွေကိုပါ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Indoor Positioning (သို့) Wi-Fi RTT
Google ရဲ့ Android P မှာ IEE 802.11 mc Wi-Fi Protocol ကို စတင် Support ပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နည်းပညာကို Wi-Fi Round-Trip-Time (Wi-Fi RTT) ဟုခေါ်ဆိုပြီးတော့ အသုံးပြုသူတွေကို အဆောက်အဦတွေထဲမှာ ရောက်နေရင်လည်း Indoor Map ကို အသုံးပြုနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု GPS နည်းပညာဟာ အလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ တိကျမှုက ၁ မီတာကနေ ၂ မီတာအတွင်းထိ တိကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
4. Multi Camera Support
Android P ဟာ Dual Camera စမတ်ဖုန်းတွေကို ပိုပြီးထောက်ပံ့လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ ကင်မရာ ၂ ခုနဲ့ အထက်ကို Application တွေက တပြိုင်ထဲအသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Dual Camera လိုအပ်တဲ့ Zooming ၊ Bokeh နဲ့ Stereo Vision တွေကို ယခုထက်ပိုပြီး ဆန်းသစ်စွာအသုံးချလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
5. HDR Video တွေနဲ့ HEIF Image Compression ကို ရရှိလာခြင်း
Google Android P ဟာဆိုရင် High Dynamic Range (HDR) VP9 Profile2ကို Built-in အနေနဲ့ စတင် Support ပြုလုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ HDR Video တွေ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ကို သီးခြားထည့်သွင်းနေဖို့မလိုပဲ Android P ကနေ လွယ်ကူစွာအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် HEIF Image Compression ကို အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ HEIF ဆိုတာကတော့ High Efficiency Image File Format ကို ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ Apple ကနေ iOS 11 မှာ စတင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့ HEIC Format နဲ့ တူညီပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Jpeg File Format အစား HEIF Format ကို ပြောင်းလဲအသုံးလာတဲ့အတွက် Android P မှာ ဓါတ်ပုံတွေဟာ သိသိသာသာကို နေရာစားသက်သာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Google ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ HEIF image တွေကို Jpeg Format ကိုလည်း အလွယ်တကူ Export ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
6. အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Machine Learning (သို့) Neural Network API 1.1
Google ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ Android Version 8.1 မှာ Neural Network API ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Android Devices တွေကို အသုံးပြုမှုအပေါ်မှုတည်ပြီး လိုက်လံ Optimize ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Machine Learning စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခု Android P မှာတော့ အဆိုပါ Neural Network API ကို Version 1.1 ကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ Machine Learning ဟာ နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက် ၉ မျိုးအထိကို အသစ်လုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android P ဟာ လက်ရှိ Android Version 8.1 Oreo နဲ့ ယှဉ်ရင် အသုံးပြုမှုအမြင်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေအများအပြားရှိလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ Setting Menu တွေဟာ ယခင်လို မဟုတ်တော့ပဲ အရောင်တစ်မျိုးစီနဲ့ ဖော်ပြတာ၊ Quick Setting Shortcut တွေမှာ Drop-down Feature မပါဝင်တော့တာ၊ Favorite Apps Dock ကိုပြန်ပြီးတော့ Dock ပုံစံ Transparent Color တစ်ခုနဲ့ ဖော်ပြလာတာ၊ Power ခလုတ်ကို ဖိထားရင် Shutdown ၊ Restart တွေအပြင် Screenshot Feature ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာ၊ Volume အတိုးအချဲ့ Slider ကိုလည်း ယခင်တုန်းက Landscape အစား Vertical ပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာ အပါအဝင် အများအပြားပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ Google Android P Developer Preview မှာပါဝင်တဲ့ အဓိကပြောင်းလဲမှုတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ အခု Developer Preview ဟာ ပထမဆုံး Developer Preview ဖြစ်သလို နောက်ထပ် Android P Developer Preview Version ၃ ခုထပ်မံထွက်ရှိဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် Features တွေ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေအများအပြားရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။
လောလောဆယ်မှာ Android P Developer Preview ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Pixel ဒါမှမဟုတ် Pixel2စမတ်ဖုန်းတွေရှိဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ လောလောဆယ်မှာ ရရှိနိုင်မယ့်လမ်းမမြင်သေးပါဘူး။ Pixel ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ယခု Android P ကို စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Developer Preview ဖြစ်တဲ့အတွက် Errors နဲ့ Bugs တွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။